Andriamifidisoa Zo · Jona 2012 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Jona, 2012
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Jona, 2012
Pakistan: Famonoana Zazavavy Dimy Iarovam-Boninahitra Fa Niara-Nifety Tamin'ny Lehilahy
Azia Atsimo 11 Jona 2012
Zazavavy dimy voampanga ho nandihy sy nihaino hira no novonoina noho ny didy navoakan'ny jirga iray. Nanokatra fanadihadiana momba ity asa mampihoron-koditra ity ny Fitsarana Tampony. Tsy fantatra be ihany ny toerana misy ny governemanta amin'ity raharaha ity.
Ejipta: Maty Ve I Mubarak?
Maty ve ny filoha Ejipsiana voahongana Hosni Mubarak? Efa tsy voatanisa intsony ny fiverimberenan'ity fanontaniana nivoaka amin'ny fitaovam-pampitam-baovaon'olo-tsotra ity. Toy izao indray no fihetseham-pon'ny mpisera Twitter momba ny tsaho faramparany teo. Araka ny tati-baovao maro, “Matory tsy mahatsiaro saina” i Mubarak. Nivoaka ny vaovao rehefa nivoaka ny didim-pitsarana manameloka an'i...
Shina: Avela Heloka Ny Mpandripaka Olona Tao Tiananmen?
Azia Atsinanana 07 Jona 2012
Nandritra ny fotoana fiareta-tory fanao isan-taona tamin'ny 4 Jona 2012 tao Hong Kong no nanoratan'ilay mpitarika mpianatra teo aloha Chai Ling tao amin'ny Huffington Post fa efa navelany ny heloky ny mpamono olona nandritra ny fandripahana. Tsy manaiky izany ijoroan'i Chai Ling izany ny mpitarika mpianatra iray hafa Wang Dan ka namoaka fanambarana ampahibemaso izay niteraka adi-hevitra.
Noferan'i Zambia Indray Ny Vidin'Ny Katsaka, Ka Mahasorena Ny Banky Mondialy
Afrika Mainty 07 Jona 2012
Efa niteraka roaka sy tonga hatrany amin'ny fikasana hanongam-panjakana ny fiakaran'ny vidin'ny katsaka, foto-tsakafon'i Zambia. Mbola nandraikitra ny vidiny farany ambony indrindra ihany ny manampahefana zambiana na dia eo aza ny fampitandremana nataon'ny Banky Mondialy amin'ny fahapotehan'ny sehatry ny fambolena vokatr'izany fanapahan-kevitra izany.
Shina: Maniry An'i Confucius Hody Ny Mpiserasera
Fanabeazana 03 Jona 2012
Ny nanambarana ny fisian'ny politika vaovao amin'ny famoahana “visa” (fahazoan-dalana hiditra malalaka ao amin'ny firenena vahiny iray) ny Departemantam-panjakana Amerikana no nampitodika ny tontolom-bilaogy Shinoa tany amin'ny Ivotoerana Confucius. Mitaky ny fankatoavana Amerikana ny Ivotoerana manana endrika Anjerimanontolo araka ny toromarika vaovao, nivoaka tamin'ny 17 Mey 2012 mba ahafahan'ny manampahaizana sy...
Côte d'Ivoire: Miteraka Romoromo Ny Fanoloana Ny Mpanazatra Zahoui
Afrika Mainty 01 Jona 2012
Nanambara ny Federasiona Ivoarianan'ny Baolina Fandaka, fa manomboka ny alatsinainy 28 mey dia voatondro ho mpanazatra sy mpifantina ny ekipam-pirenena A hisolo an'Atoa François ZAHOUI i Sabri LAMOUCHI. Miresaka momba ity fanoloana tampoka ity ny Ivoariana.